Pearson Schools | Ithemba Alilahlwa: Inoveli namanothi
Ithemba Alilahlwa: Inoveli namanothi
Izelamani ezintathu eziyizintandane kufanele zibhekane nosizi lwendlala, ubugebengu nokuphelelwa yithemba. Ingabe zizovumela usizi lushabalalise amaphupho azo ekusasa eliqhakazile? Ingabe izophumelela imizamo yazo yokuqala ibhizinisi ukuze ziphume osizini? Zizobhekana kanjani nezimfamona nobugebengu okufuna ukushabalalisa amathemba empilo engcono?
Le ncwadi ixoxa indaba edabukisayo yosizi olubhekene nemizi enganabazali emiphakathini yethu. Iqukethe izigameko eziphakamisa amaphaphu nezinoteku ezenza sibone ukuthi nanxa kungaba nezinsizi empilweni, lihlale likhona njalo nje ithemba lokuthi uma sizimisela, izinto ziyolunga ngelinye ilanga.